Global Aawaj | कस्तो छ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था ? कस्तो छ विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था ?
२० चैत्र २०७६ 8:30 am
काठमाडौ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) यतिबेला २०३ देशमा फैलिइसकेको छ । विश्वभर नै आठ लाख ५९ हजार ९१३ सङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये ४२ हजार ३४४ को ज्यान कोरोनाले लिएको छ । त्यस्तै एक लाख ७८ हजार ३५६ जनाले भाइरसलाई जितेर घर फर्किएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले अद्यावधिक गरेको छ ।
अमेरिकामा छोटो समयमै चार हजार ५५ को ज्यान गएको छ । त्यहाँ एक लाख ८८ हजार ५९२ सङ्क्रमित छन् । अमेरिकाका नेपाली मूलका एक जनाको कोराना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भयो । इटलीमा हालसम्म १२ हजार चार सयको ज्यान गयो । त्यहाँ एक लाख पाँच हजार ७९२ सङ्क्रमित छन् । स्पेनमा आठ हजार ४६४ र चीनमा तीन हजार ३१२ को ज्यान गएको छ ।युरोपका इरान, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, स्विट्जरल्यान्डमा सङ्क्रमण बढ्दो छ । बेलायतमा चार जना नेपालीको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली श्रम बजार रहेको मध्यपूर्वी एसियालाई डब्लूएचओको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमको क्षेत्र भनेको छ ।
पौडेलका अनुसार नेपाली श्रमिक अत्यधिक रहेको सनैया लेबर क्याम्प लक डाउनमा छ । यो क्षेत्र दोहाबाट दक्षिणमा पर्छ । त्यहाँ नेपाली, बङ्गाली, भारतीय र अन्य मुलुकका समेत कामदार बस्छन् । एक जना बङ्गालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि कडाइ गरिएको छ । त्यहाँ झन्डै १५ हजार नेपाली नागरिक छन् ।स्थानीय र विदेशी नागरिकलाई सरकारले कुनै भेदभाव गरेको छैन । राजदूतावासले सुरक्षित रहन सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोे छ । नेपाली तथा हिन्दी भाषामा स्थानीय रेडियोले बच्ने उपाय अवगत गराइरहेको छ । १६००० नम्बरको टोलफ्री दिएको छ । कुनै समस्या परेमा सम्पर्क गर्न भनिएको पौडेलले बताए ।
मन्त्रालयस्थित मध्यपूर्व, पश्चिम एसिया र अफ्रिका विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेले विदेशका नेपालीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार युएईमा दुई जनाको कोरोना सङ्क्रमण निको भएको छ । मार्च ३१ मा थप दुई जना गरी छ जनाको उपचार चलिरहेको त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ ।घिमिरेका अनुसार बहराइनमा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । साउदी, कुवेत लगायत अन्य मुलुकमा सङ्क्रमण देखिएको छैन । “धेरै कामदार बाहिर छन्, यो स्थिति लम्बिँदा रोजगारी र आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ,” घिमिरेले भने। जसको विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले थालेको छ ।